NAQSHADEYNTA MASKAXDA: JIIR - WARARKA
Inta badan, mulkiilayaasha dacha casriga ah waxay heleen dhulalkan inta lagu jiro qaybinta xitaa inta lagu jiro Midowga Soofiyeedka.
Waqtiyadii hore, dadku si gaar ah uma aysan dhicin dhulalka ugu habboon, inta badana waxay bixiyaan fursado aan la heli Karin baahida beeraha iyo beeraha kale.
Laga soo bilaabo halkan, goobo badan ayaa u muuqday in aan si siman loo qaabeynin oo ay leeyihiin dhinacyo kala duwan iyo heerarka sare.
Haddii aad tahay mulkiilaha dhulalka leh mugdi, ha gaarin cabashada xaqiiqadan. Dhab ahaan, iyadoo la fahamsan yahay kiiska, way sahlan tahay in meel bannaan laga dhigo meel ka mid ah goobtan oo kale oo ka badan mid ka mid ah oo leh dusha oo dhan.
Marka xigta, waxaan ka fekereynaa sida loo sameeyo meelaha leh jiir, sida loo sameeyo goobta sida ugu haboon oo raaxo leh.
Haddii jiiradu ay leeyihiin shahaado ka weyn 45, waxaa loo baahan doonaa bareer, taas oo ah, abuurista terraces.
Waxyaabaha noocan oo kale ah waa tallaabooyin waaweyn, oo mid kasta oo aad dhigto dhirta ama waxyaabaha kale ee beerta..
Terrace kasta waxay u baahan tahay derbi xajisto, kaas oo xoojiya muuqaalka iyo ilaalinta degganaanta ciidda.
Ha u isticmaalin xayawaanka leh khiyaamo fara badan maaha mid caqli-gal ah. Biyaha ayaa dhaqso u daadi doona, dhirtuna waxay heli doonaan qoyaan yar, dhulkuna waa ay dhaqaaqi karaan.
Abuurista terraces waa in lagu daaweeyaa hal abuur leh, inkasta oo raggu, dabcan, ay jeclaan lahaayeen in ay sameeyaan nooc ka mid ah qorsheyn joogto ah. Qaybahaas waa kuwo suurtogal ah in la isku daro. Marka ugu horeysa waxaad abuuri kartaa mashruucyo xitaa qaabab, laakiin qurxinta waxaa lagu sameeyaa farshaxan farshaxan.
Derbiyada terrace kasta waxaa si fiican u qurxin leh dhagaxyo, faybar iyo waxyaabo qurxoon oo la mid ah. Halkan wax badan ayaa kuxiran awooddaada iyo maskaxdaada. Xaaladdan, kharashyada mar walba ma sareeyo.
Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa faaruq jaban, taas oo sahlan inaad iibsato qiimo macquul ah oo laga helo takhasusle ama xitaa bilaash ah. Dad badan ayaa isticmaala nooc ka mid ah qashinka wax soo saarka, taas oo ku jirta qurxinta goobta waxay ku heleysaa jiritaan cusub.
Inta u dhaxaysa heerarka dabiiciga ah waxay eegaan jaranjarada weyn, taas oo sidoo kale sameeya oo qurxinaysa maahan mid adag sida ay u muuqato. Xagga sare ee kabaha waxaad ka dhigi kartaa gogol. Si aad uhesho nooc ka mid ah farqiga u dhexeeya qotada toosan ee terrace a, waxaad isticmaali kartaa pergolas, kuwaas oo lagu qurxiyey dhirta fuulaya.
Sidan oo kale, waxaad abuuri kartaa aagag geedo gebi ahaanba kala duwan, taas oo ugu dambeyntiina abuuri doonta kaleidoscope iyo isafgarad. Waxaa intaa dheer, barkad kastaa waxay noqon kartaa sariir soodhaf ah oo cirif leh ama dhul yar oo leh ceel ama wax la mid ah.
Waxa la dhiso derbiyada terraces - su'aal weyn.
Xulashada ugu fiican waa isku-dhafka guud ee goobta. Tusaale ahaan, haddii guriga uu yahay lebbiska, darbiyada waxaa laga samayn karaa leben.
Maaddada caadiga ah waa dogobka geedka, laakiin waxay ubaahanyihiin iska ilaalin. Isku darka gaarka ah ama qashinka ayaa loo baahan yahay.
Dhinaca derbiga (gudaha gudaha) waxaa lagula talinayaa in dhagax la jajabiyo dhagxaanta dhererka oo dhan. Qalabka hoostiisa waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto tuubooyin biyo saarid. Waxay u oggolaadaan qoyaan aan loo baahnayn in ay ka baxaan berriga.
Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan doontaa taageero dheeri ah iyo xulashada ugu fiican halkan waa xoojinta biraha. Qalabyada kale ee biraha waa in lagu rakibaa meel gaar ah oo dherer ahaanta ah ee derbiga..
Dheeraad dheeraad ah, haddii darbiga sareeyo, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad jeexjeexdo dhismaha jihada carrada, kaas oo ka soo baxa derbiga, waxaana jira sabab loo dhiso aasaaska.
Dabcan, dhammaan talooyinkani waxay ku xiran yihiin cabirka qaab-dhismeedka. Baaxadda weyn ee xayndaabka iyo derbiyada, dhismaha waa inuu noqdaa mid xoogan, shaqooyin yarna waa loo baahan yahay si loogu dabiiciyo muuqaalka.
On slopes, waa inaad si firfircoon u isticmaashaa grooves kala duwan iyo derbiyada hoose, halkaas oo aad u baahan tahay si loo abuuro dheecaan biyo. Dhinaca kale, meesha sare ee qalabka, waxaad ku rakibi kartaa weel biyo ah iyo ka bilowdo shabakad ah grooves. Thanks to this, aad si fudud u fududayn kartaa waraabinta ee terraces.
Haddii aad go'aansato inaadan isticmaalin qaab joogto ah, tixraac foomamka dabiiciga ah.
Waxaa loo isticmaali karaa in lagu kala firdhiyo xagasha barxadda, taas oo u dhaxaysa waddooyinka aan cidi lahayn, mararka qaarkood waxaa la isku maraa marxaladaha tallaabooyinka.
Muuqaal noocan oo kale ah wuxuu noqon doonaa mid dabiici ah..
Intaas waxaa dheer, mararka qaarkood waxay ku haboontahay in la doorto nidaam bilaash ah.
Dhammaanba, qaybta dabiiciga ah waxay u muuqan kartaa mid dabiici ah, laakiin dhab ahaantii waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la fuliyo baahiyaha qaar ka mid ah mulkiilayaasha, hoos u dhigo cilladaha iyo in ay si wanaagsan u isticmaalaan aagag kala duwan, iyada oo hadba ku xiran guryaha carrada, iftiinka iyo xuduudaha kale.
Tilmaamahan, tallaabooyinka laga sameeyay maaddooyinka dabiiciga ah waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican.:
dushooda - dhinac dhinac u taagan dhinaca bidix oo samee talaabo gaar ah;
Diiwaanada - waxaa lagu dari karaa tallaabo gaar ah oo si fiican u taageeri kara dhulka;
Boodhalladu way adag yihiin in la qaado, laakiin tallaabooyinka dhagaxu waxay u muuqdaan kuwo si gaar ah u soo jiidanaya iyo dabiiciga ah waxayna bixiyaan awood sare.
Sida aad u arki karto goobo leh jiir waxaa jira fursado badan. Waxa kaliya oo lagama maarmaan ah in si karti leh loo tixgeliyo sifooyinka beertaada oo aad u tuurto kuwa hadda jira.